Al-Baraa Binu Maalik Al-Ansaari – Wajibad
Al-Baraa Binu Maalik Al-Ansaari (RC)
Al-Baraa Binu Maalik
”Baraa Madax Ha Ugu Dhigina Mid Ka Mid Ah Ciidamada Muslimiinta Cabsi Laga Cabsanaayo Inuu geesinimadiisa Ku Jebiyo Ciidankiisa.” [Cumar Binu Khattaab.]
Al- Baraa wuxuu ahaa nin booreysan oo basaasan, una dhashay baryari ay adagtahay inay isha si fiican u qabato jirkiisa. Hase ahaatee iyadoo ay taasi jirto, wuxuu haddana laayay boqol ka mid ah mushrikiinta/gaallada isu-soo-bax-dagaaleed, iyadoo aynan ku jirin kuwa kale ee uu ku laayay bartamaha dagaallada.
Waa geesigii uu arrintiisa awgeed u qoray Cumar Binu Al-khadaab, dhambaalkiisii uu u qorayay shaqaalihiisa iyo guddoomiye-goboleedyadiisa markuu lahaa “yaan Baraa madax looga dhigin ciidan ka mid ah ciidamada muslimiinta, cabsi laga qabo in geesinimadiisa awgeed ciidankaas la jebiyo”.
Qofkaas aynu ka hadlayno waa Al-Baraa Binu Al-Maalik Al-Ansaari Ilaah ha ka raalli noqdee, waa Anas Binu Maalik walaalkiis ee ahaa adeegihii Rasuulka (scw).
Haddeynu xoogaa milicsano si aan halkan uga soo gudbino sheekadii la xiriiray geesinimadii Al-Baraa Binu Maalik Al-Ansaari waxaa hubaal ah inay sheekadu nagu dheeraanayso, hase ahaatee waxaan soo gudbinaynaa mid ka mid ah sheekooyinkiisii ku saabsanayd geesinimadii Al-Baraa Binu Maalik Allaha ka raalli noqdee, sheekadaas oo kaa deeqsiinaysa kuwa kale.
Fidnadii ugu Horeysay ee
Soo Waajaha Islaamka
Kuwii ugu xoogga badnaa ee ka mid ahaa qabiilooyinkii ka laabtay diinta islaamka, uguna tirada badnaa ayaa waxay ahaayeen qoyska reer Banuu Xaniifa, qabiilkaasoo uu ka dhashay ninka la yiraahdo Musaylamata Al-kadaab.
Waxaa Musaylamata u soo saftay oo u hiiliyay tolkiisa iyo xulafadiisuba oo gaarayay afartan kun oo dagaalyahaniin ah, waxayna intooda badan u raaceen ficillo qabyaaladeed, ee ma aynan u raacin rumeyn ay rumeynayaan. Maxaa yeelay qaar ka mid ah kuwaas ayaa waxay oran jireen “waxaan qiraynaa in Musaylamata uu beenaale yahay, Muxammad-na uu runloow yahay.., hase ahaatee beenlowga Musaylamata ayaan ka jecelnahay runlowga Muxammad”.
Cabsida Laga Qabo Haddii
La Jebiyo Ciidamada Muslimiinta
Waxaa dhulkii Yamaama foodda isku-jaray labadii ciidan, ciidankii muslmiinta ee uu hoggaaminayay Khalid Binu Al-Walid, iyo ciidankii gaallada ee uu hoggaaminayay Musaylamata Al-Kadaab.
Waqti yar kamaba soo wareegan, jeer durbadiiba ay xooggaysato dhinacii Musaylamata iyo ciidankiisa, halka ciidamadii muslimiinta-na ay ka billaabaan dib-u-gurasho, dhinaca kale waxay ciidankii Musaylamata cagta mariyeen teendhadii weyneyd ee uu lahaa Khalid Binu Al-Walid, wayna siibeen, waxayna sigeen inay dilaan xaaskii Khalid Binu Al-Walid hadduusan badbaadin nin iyaga ka mid ahaa.
Waxaynu arkaynaa Thabit Binu Qays oo sida calankii Ansaarta oo isu diyaarinaya geeri iyo dhimmasho, isagoo xirtayna kafantii meydka. Wuxuu qotay godkii lagu aasi lahaa, dabadeedna wuxuu labadiisii dhudhun ku aasay godkii, isagoo ku sugnaaday goobtaas. Sidaas ayuu ahaa oo ugu dagaalamayay ilaa markii danbe laga dilay isagoo shahiid ah.
Sidoo kale waxaynu kaloo arkaynaa Zeyd Binu Cumar Binu Al-Khadaab oo ahaa Cumar Binu Al-Khadaab walaalkiis oo u dhawaaqaya muslimiinta isagoo leh “dadyahoow goowsihiina qaniina, laayana cadoowgiina, horeyna u sii socda.., dadyahoow, wallaahi ayaan ku dhaartaye hadli maayo wixii oraahdaydan ka dambeeya jeer laga jebiyo ciidmada Musaylamata ama aan Eebbe kala kulmo, annigoo wata xujadayda iyo markhaatigayga”.
Intaa dabadeed wuxuu rogaal celin ku sameeyay gaalladii isagoo dagaalamaya, jeer markii danbe isna laga dilo isagoo shahiid ah. Waxaan kaloo isla goobtii dagaalka ka arkaynaa misna Salim oo ahaa mowlihii (kii la lahaa) Xudeyfa Ilaah ha ka raalli noqdee, isagoo sida calankii muhaajiriinta.
Waxaa u cabsaday tolkiisii muhaajiriinta, waxayna ku yiraahdeen “waxaan ka cabsanaynaa in nalooga yimaado dhinacaaga”, wuxuuna ugu jawaabay hadalkan qiimaha leh “haddii la idinkaga yimaado dhinacayga waxaan ahaanayaa qof xambaarsan (xifsadan) qur’aanka kan ugu xun”, dabadeedna si geesinimo ku jirta ayaa wuxuu rogaal celin geesinimo oo ba’an ku celiyay gaalladii, jeer isna laga dilo isagoo shahiid ah.
Hase ahaatee, halyeeyadaas aynu soo aragnay dhammaantood waxay ahaanayaan wax yar marka loo barbardhigo halyeeynimada iyo geesinimada Al-Baraa Binu Al-Ansaari Ilaah ha ka raalli noqdee.
Al-Baraa oo Looga Fursan
Waayay Hoggaaminta Ciidamada
Wuxuu Al-Baraa sidii baarashuudka oo kale ku soo kor-degay ciidamada Musaylamata dhexdooda, wuxuuna billaabay inuu la dagaalamo gaallada, isagoo seeftiisa ku laayay toban ka mid ah gaalladii jeer uu markii danbe ka furo iridkii, iyadoo jirkiisa ku yaaliin dhowr iyo toddobaatan dhaawac oo isugu jiray leebab iyo warmo. Muslimiintii ayaa hal meer ku soo butaacay beertii geerida.
Iyagoo ka soo galaya beerta derbiyadeeda iyo albaabadeeda, waxayna seefahoodii kaga shaqeeyeen gaalladii ka riddowday/laabatay islaamka, kuwaasoo ku dhuuntay beerta derbiyadeeda jeer laga laayo wax ku dhow labaatan kun, waxayna muslimiintii gaareen ninkii Musaylamata ahaa, isna markii danbe way dileen, wuxuuna ahaa ninkii ugu horeeyay ee iska sheegta nebinnimo kadib Nebinnimada Nebi Muxammad (scw).
Al-Baraa oo Jeclaa
Haddaba, dagaalkan wuxuu Al-Baraa Binu Malik baryay Eebbe (sw), isagoo Alla weydiisanaya inuu ku shahiido dagaalka, Ilaahayna wuu aqbalay ducadiisii, kadib markii uu goobtii dagaalka dhulka ku dhacay isagoo la dilay, una hilowsan la kulanka Eebbe (sw). Ilaahay ha iftiimiyo wejigii Al-Baraa Jannada dhexdeeda, ishiisana Allaha ku qaboojiyo la jirka iyo u dhowaanshaha Nebi Muxammad (scw), Ilaahayna ha ka raalli noqdo, aamiin.